Mamwe Maruva Kupenda Kuwira Kune Anonakidza Dhijitari Mifananidzo
10 Anoshamisa Maruva Kupenda chete naDavid Bridburg
Kutanga chirongwa chitsva kunogona kutyisa. Ndinozvinzwisisa. Bvarura zvinhu zvidimbu zvidiki. Chengeta zviri nyore. Isa tsoka imwe pamberi perimwe.
Ndakaita izvozvi. Zvino mamwe makore gare gare ini ndave neanosvika mazana mana emabasa eumhizha. Kubva kutanga kune nyanzvi iyi maruva kupenda yakabva pane nyore kuita kune yakaoma kunzwisisa.
Nyaya yangu yakatosiyana. Saka hunyanzvi hwangu hwakasiyana kwazvo. Uye ini handigare ndakadzikama. Mabasa gumi andiri kuda kukuratidza une nyaya inonakidza.
Ini ndinonzi David Bridburg. Ndiri Post Yemazuva ano muimbi. Nhoroondo yangu inosanganisira kuremara kwekuzvara. Dambudziko rangu ndeyekuongorora kwekugadzirisa kusagadzikana. Iwe unogona kunge uine nhengo yemhuri kana shamwari yakanaka yakave nematambudziko ekudzidza.
Dzimwe pfungwa dzebofu dzakasimudzwa. Zvakanaka chinhu chakadai ndosaka ndiri muoni anoona.
Netsaona kuwira mune hunyanzvi mukoreji, ndakanakidzwa kuve mumakirasi iwayo. Kunyura muzvidzidzo kunge chipanje, ndakava anozvimanikidza pachangu. Muzvinafundo mukuru aizvida.
Zvidzidzo zvacho zvaive zvakanakisa. Handina kuziva izvozvo panguva iyoyo. Ndakapihwa maturusi ekugadzira uye hapana mitemo.
Iye zvino kana iwe ukatarisa pane yakanaka nyika yeNew York City, isu tinoziva yakawanda yacho haina basa. Mubvunzo unomuka, kana iwe ukaturika kuti neimwe nzira ichagara pamadziro?
Ini ndakagadzirira maprints angu kune zvaunoda. Pfungwa ndaive nemunda wezuva wakazara nemafungiro epakutanga. Ehezve epakutanga mazano ari kumatanho akasiyana mune yega yega mabasa angu.
Mazuva ano ini ndinotengesa maruva dhizaini yangu semaposita uye mapurani evasvas.
Iyi mifananidzo yakavakirwa pamaruva. Sekuwana nyore kune maruva akapararira pawebhusaiti yangu, ona yangu Roses uye Maruva Kuunganidza.
An Intro kuna van Gogh
Blend 16 van Gogh naDavid Bridburg
Iwe unogona kunge uchiziva iyi inozivikanwa uye yakafuridzirwa Roses uye Irises naVincent van Gogh. Ndinoda chidimbu.
Sa Post Post Artist ndichishandisa pendi yemaruva, ini ndaifanira kuita chinhu changu. Kuti uedze neimwe nzira kuti uvandudze pendi uye kuti uite, shinga nditi, zvakanaka chaizvo? Iwe iva mutongi.
Vazhinji venyu muchada izvi. Vanhu vazhinji vanoona webhusaiti yangu, uye vanowana hunyanzvi hwangu hunonakidza kwazvo. Ndiyo pfungwa. Kuenda munzira nyowani kunonakidza.
Ndakagara mumakirasi angu ekoreji ndichishanda munzira nyowani. Kupedza kudzidza muna1990 imwe nguva muna 2006 ndakatanga kuvhura iro dambudziko nyowani.
Kukwira kwangu kwave kunakidza. Iwe uchaona zvimwe zvisingatarisirwi zvinhu.
Inotevera Gauguin, uye Nezvisingatarisirwi
Iwe unogona kunge wakaona ruva nemaruva ane mavara senge muraraungu, akanaka uye akapusa.
Izvi kunyangwe iwe usati wamboona kare, ini ndinoshandisa gumi nemashanu Paul Gauguin mifananidzo yega yega yakatemwa kuti ikwane sepeturu.
Julian tsime rezita rokutanga.
"Iri ndiro zita rako iro riri muvengi wangu;
Iwe uri wega, kunyange usiri Montague.
Chii chinonzi Montague? … O, ive rimwe zita!
Chii chiri muzita? iyo yatinoti ruva
Nedzimwe Chero Rimwe Zita raizonhuhwa serinotapira;
Saka Romeo yaizoita, dai anga asiri Romeo akafona,
Chengetedza icho chinodiwa kukwana icho chaanokwereta
Pasina zita iri. ”(Romeo naJuliet, Mutemo-II, Chiitiko-II, Mitsara 38-49)
Ndiani anogona kuramba Shakespeare diki?
Kana iwe ukabaya pamufananidzo iwe unogara mune yangu "Maruva uye Roses Unganidzo". Pane matatu maBhaibheri angu e "The Rose of Gauguin" ayo andinoda kuti uone. Unogona kuzorora uye uone iyo yakazara muunganidzwa kubva pano pamusoro pemukombe wekofi.
Ruva reGauguin naDavid Bridburg
Uri kukumbira mubato pane zvandiri kureva nePost Yemazuva Ano?
Iyo yakapusa, yakajeka nzira yekutsanangudza postmodernism, zvese zvakamboitwa kare. Nekutora kubva pane zvakapfuura, tinogadzira chimwe chinhu chitsva. Izvi zvinopesana. Isu tinotangazve zuva ranhasi.
Kusvika Vincent van Gogh
Iwe uchaona van Gogh ndemumwe wevandinofarira maartist. Kubhadharazve hunyanzvi hwake chinhu chikuru chinotyausa basa rangu.
Chirevo ichi zvinosuruvarisa, Vincent van Gogh haana kumbotengesa chero chemifananidzo yake panguva yehupenyu hwake. Mune izvi, internet iri kundibatsira kutengesa pfungwa dzangu. Tichifunga makore angu ekutanga muchikoro chepuraimari nedambudziko rekunzwa, ini handitore kugadzira nekutengesa hunyanzvi hwangu zvisina basa
Kugadzira rakasiyana siyana rebasa rave iri zano rakanaka kwazvo kwandiri. Ini handizive chauchazoda. Zvimwe zvekudhindisa zvakatengwa nevanhu, ndakafunga kuti hazvife zvakatengesa. Zvimwe zvinhu zvandaifunga kuti zvingave zvakakurumbira hazvina kumbobvira zvatengesa. Iwe chete ndiwe unogona kusarudza zvaunoona mune basa rehunyanzvi.
Yakarongedzwa 4 van Gogh naDavid Bridburg
Ndakafunga kuti izvi zvichatengesa. Vamwe maartist vakandiudza izvi zvakanaka chaizvo. Vashoma vanhu vakandiudza kuti zvinoshamisa. Nibbles hapana inoruma.
Zvisinei, ini ndinowana yakawanda yekugutsikana kubva mukugadzira. Pakupedzisira, zvave zvakakosha.
Zvidimbu zvidiki zvine mutsindo zvekubvisa zvinoumba zvese. Kunyangwe zvasvika pamifananidzo yekufananidzira.
Iwe unogona kugara zvakanaka ndokunakidzwa nemabasa aya. Ndozvandinoda. Iyi blog inoitirwa kuve nyore kuverenga.
Kukwana kutaura, ini ndichataura "kubvisa" nekuti kuuya kubva kuna van Gogh kubviswa kune komputa pikisi kubvisa izvi zvishandiso zvangu.
Sezvo ini ndaigadzira hunyanzvi kubva muhunyanzvi, ndakatanga kushandisa maturusi edhijitari kugadzira hunyanzvi pasina hunyanzvi. Zvimwe zvezvidimbu zvitsva izvi ndichazvisanganisira.
Music Notes 3 naDavid Bridburg
Iwe unogona kuona ini handina kana rimwe chete pendi pendi. Tumira Yemazuva ano hunyanzvi haina rakakura reti dzidziso. Ndakangoita zvangu. Yangu imwechete yekutungamira yaive yekufananidza matoni erudzi rumwe nerumwe muchikamu chakapihwa.
Nekufarira kwako maruva, iwe wakauya kune ino blog kuti uone zvimwe zvekuyedza kutaura. Asi tulip inoda kuramba iri tulip muchimiro.
Abstract Ruva 2
Girazi rako rakashongedzwa rine mutsindo. Ini ndinopinda mukati memaruva, asi ikozvino hapachina genus.
Abstract Ruva 2 naDavid Bridburg
Iyi diki nhevedzano yezvinyorwa zvitatu zvinoedza kusununguka kwemakomputa dhizaini. Asi chishandiso chedigital chakanyatsojeka.
Kirasi yangu yekutanga yekudhirowa yakanangana nekusununguka. Kufambisa ruoko kubva pabendekete kuita mufananidzo. Kupesana neruoko.
Ndichitarisa vanyori kubva nezuro uye vezera razvino, ndakaona kukosha kwebasa redhijitari kusununguka.
Izvi zvinova nyowani nyowani. Yakagadzirwa uye yakakwenenzverwa, iyi mifananidzo yakanaka.
Yekupedzisira Twist muVatatu
Green anowana imba. Tinorarama pane yakasvibira nyika. Shades yegirini mune yakashongedzwa shanduko sekufamba kwemakumi emakore.
Uyu mumvuri wegirini wakasarudzika, uchikumbira mubvunzo, "izvi ndezve kutanga kwema1970? Uye ruva simba? ” Zvakanaka, aiwa iri girini rakasarudzika kune izvozvi.
Ndiri kushanda kukuvaraidza newaravara pendi yekushongedza.
Abstract Ruva 3 naDavid Bridburg
Ndizivise kuti unoona sei uyu mufananidzo. Isu tese tinoona ruvara zvakasiyana.
Mhinduro yako inokosheswa. Vanhu vakavhura nyika yekunzwisisa kwandiri pamusoro pemakore.
Zvinogona Sei Kusununguka?
“Ini ndabata tawidhi yegate. I did, I did ”- Tweety yero canary.
Maruva muMhepo naDavid Bridburg
Ndinokupa serendipitous. Kutamba kwakachena, ini handina kukwanisa kuwana yakasununguka nemufananidzo wekombuta.
Mhepo inokusimudza, yoenda newe. Shamwari yangu inoenderana nemufananidzo uyu sekuzorora kukuru kwekushushikana. Anotarisa asingagumi pamaumbirwo eorenji kune madiki fur fur fimin.
Ndiye shamwari inoseka zvakanyanya yandinayo. Akarembedza tangi makumi mana neshanu yemifananidzo iyi kumadziro akatarisana nechoto chake. Pre Covid, shamwari dzake dzaimira voti, "ndiyo katsi", ichinongedzera pakati ruva?
Mhinduro, "iye chete ndiye anoziva kana ari katsi", aine kupenya mumaziso ake.
Imwe yeshamwari dzake dzepedyo yakaenda kune yangu saiti kunotenga uyu mufananidzo, asi akatenga zvandiri kuzokuratidza zvinotevera….
Dhijitari Maruva Kupenda
Iwe unogona kuona mune ino mabrashi angu. Ndinopenda. Iwo ekuwedzera kudzora ndiwo ruvara kwenzvimbo yangu isina kunaka, nzira inoshamisira yekutaura kumashure.
Kushandisa blues kunogona kutambanudza kudzika kuve nekusingaperi. Sedenga rebhuruu rinofamba zvakanaka kupfuura iko kumusoro.
Maruva Matsvuku naDavid Bridburg
Kutaura saDave, kwete semuimbi, iri bhuruu rakandibata. Digitally kusarudza mavara hakusi nyore. Kuziva zvandaida kupinda mukati, ini ndanga ndisina chikonzero chekutora ndichitenderera mumakara mavara.
Yakapusa naDavid Bridburg
“Batisisa paminiti baba! Ndiyo mifananidzo miviri ”, ndinokunzwa uchitaura izvozvi.
Hongu, ndinobvuma mhosva yako. lol
Tarisa zvakanyanya paFragile, kudzvanya kunounza iwo maonero ekuona pane yangu yekutengesa webhusaiti. Pane hunhu hwekunaka hwaunogona kuona. Mhungu inodziya.
Iko kune kunetseka kwekunzwisisa mumufananidzo uyu. Unyoro hunosvika kumoyo wako.
Apropos, ndinokusiya neichi chisikwa chekupedzisira.
Hupenyu kunze kweRufu naDavid Bridburg
Baba vangu vakabva vada mufananidzo uyu. Chinhu chine chinangwa nehupenyu. Kwandiri iwo wanga uri mubairo.
Ndakagadzirisa zvakare Vincent van Gogh's Roses uye Irises kakawanda. Ichi chifananidzo kunyangwe chinova chirevo chakakura kwazvo.
Kudzoka mukugadzirisa uye ndokupa iwe imwe yemhinduro yangu, baba vaifarira kutaurwa muchinyorwa changu. Amai vanoda kutenga "Maruva muMhepo", nekitsi. Amai imbwa munhu. Izvi zvakandishamisa chose.
Iwe waona edhijitari mazano anoshandura hunyanzvi. Mhando dzakasiyana dzeaesthetics dzakakura kwazvo.
Pfungwa dzangu dzakadzika midzi mutsika nemagariro edu. Kana uchitenga zvehunyanzvi iwe ungangoda kufemerwa kutsva. Kubudirira apa kuberekwa patsva, kuvandudzwa kwehunyanzvi uye hupenyu.
Iko kune yakasarudzika tsika yekuverenga ichiitika mune yakanakisa hunyanzvi, dhijitari mazano v ekutanga kupenda. Iyo artworld, senge iyo kana kwete, iri kutetereka kubva pakuparara kuri gallery yenyika. Iwo mafarari arikushaya kwekutengesa kwadhijitari.
Maitiro acho ndeemhizha, inini, kutora nzombe nenyanga, ikubate pabendekete woti, "ndiri pano". Mhinduro kune zvinyorwa zvangu yanga ichidziya uye ichitsigira.
Vateresi vakaita zvimwe zvinonakidza kutenga. Vakaroorana muNew York City vakatenga "American Intellectual 6”Masvondo maviri apfuura eimba yekutandarira. Chidimbu chirevo chisina kujairika chekuenzana kwemadzinza. Akazvitora zvachose. Iyo yekudhinda ndeye 84 XNUMX canvas mural.
Chii chinonyanya kufadza nezvenguva yedu, mune ino dhijitari zera, anodhindisa anogona kugadzirwa mukuwedzera kutangira pa8 kusvika ku108 ″. Iwo 84 ″ anodhinda anokwana nzvimbo yavo zvakakwana.
Nenzira, iyo American Intellectual Unganidzo ndeyePop Pop mifananidzo. Rudzi rwekuwedzera kune ese eangu maunganidzwa akaunganidzwa ndiPostmodernism.
Ini ndoda kukusiya iwe nepfungwa, kunzwa, uye maonero ekuti kukwirira kwekupedzisira hunyanzvi kunowanikwa online neni ndega uye nevamwe maartist. Iwe unogona kuwana yedhijitari aesthetics iyo inofarira iwe uye inokodzera yako yehupenyu maitiro.
Dzvanya pane chero chifananidzo chako chinoshamisira kuti uone iyo peji rekutengesa peji pawebhusaiti yangu (haishande kumufananidzo wekuvhara kumusoro).
Mubvunzo: Izvo zvese zvakaitwa kare? Mhinduro dzacho dzinogona kukushamisa.
Canvas PrintsTumira Yemazuva Ano GarariPosters